गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफा ३३% बढ्दा बीमाशुल्क ११४% बढ्यो
कात्तिक २८, काठमाडौं । गुराँस लाइफ इन्स्यारेन्स कम्पनीले चालू आवको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको नाफा गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालू आवमा ३३ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । कम्पनीले गत आवको पहिलो त्रैमासमा रू. ३ करोड १९ लाख नाफा कमाएकोमा चालू आवमा वृद्धि भएर रू. ४ करोड २७ लाख पुगेको छ ।
त्यसैगरी चालू आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको बीमाशुल्क ११४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । कम्पनीले गत आवको पहिलो त्रैमासमा रू. ४५ करोड २९ लाख बीमाशुल्क आर्जन गरेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा रू. ९७ करोड ३ लाख आर्जन गरेको हो ।
चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ८७ करोड ७० लाख रहेको कम्पनीले जगेडा कोषमा रू. ५६ करोड ६२ लाख सञ्चित गरेको छ । चालू आवको पहिलो त्रैमाससम्ममा कम्पनीको जीवन बीमाकोषमा रू. ८ अर्ब ५० करोड जम्मा भएको छ । कम्पनीले शेयरधनीलाई हकप्रद शेयरपछि कायम भएको चुक्तापूँजीको ५ दशमलव २५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव पारित गर्नका लागि कम्पनीले आगामी मंसिर ४ गते साधारण सभा आयोजना गरेको छ ।
कात्तिक १९ गतेसम्म शेयर कायम गरेका शेयरधनीले लाभांश पाउनेछन् । प्रतिशेयर आम्दानी रू. ९ दशमलव ११, मूल्य आम्दानी अनुपात ६६ दशमलव ६० र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १३२ दशमलव ८२ रहेको छ ।